Iindaba-I-CPHI kunye ne-P-MEC China 2020
I-HANGZHOU IMMUNO Biotech ithathe inxaxheba kumboniso we-CPHI kunye ne-P-MEC China 2020, ibonise iintlobo ezahlukeneyo ze-COVID 19 test kit kunye nezinye iimveliso kumboniso, abathengi beza emnqubeni ukuze babonisane nomjelo ongapheliyo kwaye bafikelela kwiinjongo zokusebenzisana nenani labathengi.
Ngentsasa ka-Disemba 15, 2020, i-CPHI kunye ne-P-MEC i-China 2021 ibibanjelwe eShanghai. Ukulungiselela ukudibanisa ngcono izixhobo zokulwa i-COVID 19, i-China iququzelele lo mboniso, kwaye i-HANGZHOU IMMUNO Biotech yawongwa ngokuthatha inxaxheba kulo mboniso.
Kulo mboniso, umlawuli we-R & D uMnu .li wakhokela iqela ukuba lithathe inxaxheba kulo mboniso. Asibonisanga kuphela iimveliso zokugqibela ze-COVID 19 zovavanyo ezifana ne-2019-ncov Igg / Igm test antibodies kunye ne-COVID 19 antigens kit kunye nezinto ezingafunekiyo ze-COVID 19 reagents reagents, iinjineli zethu zikwabonelela ngenkxaso yezobuchwephesha kumaqabane kunye nabathengi kwaye zaphendulwa imibuzo kwisiza
I-HANGZHOU IMMUNO i-Biotech elites igcwele amandla, intshisakalo, isazela, isebenza ngononophelo kubo bonke abathengi basekhaya nabangaphandle ngetekhnoloji ephezulu kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu, phendula imibuzo yabathengi, kwaye uxoxe ngentsebenziswano yexesha elizayo kubunzulu, obonyusa ukuthandwa kunye nefuthe le-IMMUNO. Ngexesha lomboniso, amakhulukhulu abathengi eza emnqubeni wethu ukuxoxa ngemicimbi yokusebenzisana, abasebenzi bethu bokuthengisa bamamele ngomonde, baphendula imibuzo ngokufanelekileyo, kwaye banikezela ngezisombululo, kwaye bafikelela kwiinjongo zokusebenzisana nabathengi abaninzi kwindawo yomboniso. Ukuvavanywa kweemveliso zethu, kodwa kukwaqwalaselwa iinkonzo zethu.
I-CPHI kunye ne-P-MEC i-China 2021 ifikelele esiphelweni esifanelekileyo. Sijonge ukusebenza nawe ukufuna uphuhliso kunye nokwenza impumelelo kunye!
U-Hangzhou Immuno uya kuthi, njengesiqhelo, abonelele abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu, inkonzo ecingisisiweyo kunye nenyameko ngaxeshanye, ngaxeshanye, siza kuqhubeka nokwenza iinzame ezingagungqiyo zokulwa i-COVID 2019 yokuphuhlisa kunye nokuvelisa iimveliso ezisebenzayo zokulwa intsholongwane.